E Bipụtara PET Cup Manufacturers - China E Bipụtara PET Cup Factory & Suppliers
16 oz Biri PITA Plastic Cups 92mm nwee ikike nke 375ml. Ihe a, Polyethylene Terephthalate (PET), bu ihe eji eme enyi na ebe obibi, kristal doro anya nke oma maka odiwanye nma ma nwee ike inye ezigbo ogwugwu.Anyị 12 oz omenala e biri ebi PET doro anya plastic iko ebipụtara na nri nchekwa nri iji hụ na ngwaahịa anyị dabara adaba maka ndị na-eri nri. 12 oz E Bipụtara PITA Plastic iko dị mma maka egwuregwu egwuregwu bọọlụ, egwuregwu, ụlọ mmanya, kọfị, ihe omume na ndị ọzọ. Site n'ọtụtụ ojiji, ha na-enye ohere dị egwu iji nweta akara, akara ma ọ bụ imewe n'aka ndị ahịa gị
Omenala e biri ebi PET cup
- Iwu kacha nta 30,000pcs
- Ruo agba agba isii
- Ebute Oge 2-6 izu
- E Nwere Size: 2oz, 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
Naanị zitere anyị faịlụ gị emebere ma ọ bụ na anyị nwekwara ike ịmebe akwụkwọ maka obibi akwụkwọ.
PET anyị na-ekpochapu nke ọma (polyethylene terephthalate) iko rọba na-anabata nnabata, nke pụtara na anyị nwere ike mezuo ezigbo mma. Ha nwere ike e biri ebi na 1 ma ọ bụ 2 ntụpọ Pantone agba na nwere ike na-ọnọ na ịnara domed ma ọ bụ ewepụghị ahịhịa slotted lids.
N'ụbọchị a na oge a, ụlọ ụlọ dị ezigbo mkpa. omenala e biri ebi plastic iko jiri akara ma ọ bụ slogan nke ụlọ ọrụ gị na-agbatịpụrụ ndị ahịa gị aha gị pụrụ iche, na-abụ akụkụ nke mkpọsa mkpọsa ahịa gị.
omenala e biri ebi plastic iko bụ uru-tinye ọrụ na ndị ahịa anyị. anyị na-enye akara ngosi na ahaziri ahaziri ọrụ na ọtụtụ ụdị nkwakọ ngwaahịa nri enwere ike ịwepụta - mbipụta ahaziri na iko rọba, iko kọfị, iko iko na ihe ndị ọzọ!
E Bipụtara PITA Plastic iko na China
Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa maka E Bipụtara PITA Plastic iko n'ime china .The ihe, Polyethylene Terephthalate (PET), bụ eco-enyi na enyi, crystal doro anya na agba maka enwekwukwa visibiliti na ike inye magburu onwe anwụ ngwa ngwa. Ihe niile nke anyịClear PET Plastic iko enwere ike ịhazi ya ma bipụta ya na ihe ọ bụla n'echiche gị nwere ike ịnye na onye nrụpụta ụlọ anyị nọ n'aka anyị ọ bụla, na-enyere aka ime ka echiche gị dị ndụ!